AHOANA NO HANAISOTRA NY FOMBA IVELAN'NY INTERNET AMIN'NY INTERNET EXPLORER - INTERNET EXPLORER - 2019
Tena Internet Explorer
Atsaharo ny mozika offline ao amin'ny Internet Explorer
Ny tsy fetezana tsy an-kira ao amin'ny navigateur dia ny fahafahana manokatra pejy web izay efa nijeranao mialoha tsy misy aterineto. Tena tsara izany, saingy misy fotoana izay tokony hivoaka ity fomba ity. Raha ny fitsipika dia tsy maintsy atao izany raha toa ka manova ny alàlan'ny offline ny habaka, na dia misy tambajotra aza. Eritrereto koa hoe ahoana no ahafahanao manova ny fomba fiasan'ny offline Internet Explorer, satria ity tranokala ity dia iray amin'ireo browsers malaza indrindra.
Tsara ny manamarika fa tsy misy safidy tahaka ny offline-n'ilay dikan-teny farany amin'ny Internet Explorer (IE 11)
Atsaharo ny mozika offline ao amin'ny Internet Explorer (ohatra, IE 9)
Sokafy Internet Explorer 9
Ao amin'ny zorony ankavia amin'ny navigateur, tsindrio ny bokotra. rakitraary tsindrio ny boaty Miasa tsy miankina
Atsaharo ny mozika offline ao amin'ny Internet Explorer amin'ny alàlan'ny rejisitra
Ity fomba fampianarana ity dia ho an'ny mpampiasa PC ihany.
Tsindrio ilay bokotra fanombohana
Ao amin'ny boaty fikarohana, midira ny baiko regedit
Mankanesa ao amin'ny HKEY + CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion sampana Internet Settings
Ampifanaraho ny mari-pamantarana GlobalUserOffline amin'ny 00000000
Farito ny tonian'ny rejisitra ary atsangano ny solosaina.
Afaka minitra vitsy monja, afaka manidy ny aterineto ianao ao amin'ny Internet Explorer.
https://termotools.com mg.termotools.com © Internet Explorer 2019